Anagu Waxaanu U Ciyaarnaa Si Ka Duwan PSG- Goolhaye Ter Stegen Oo U Jawaabay Solskjaer. - GOOL24.NET
Anagu Waxaanu U Ciyaarnaa Si Ka Duwan PSG- Goolhaye Ter Stegen Oo U Jawaabay Solskjaer.
April 15, 2019 Mahamoud Batalaale
Goolhayaha kooxda Barcelona ee Ter Stegen ayaa u jawaabay macalinka kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer oo saxaafada ka hor sheegay in ciyaartoyda kooxdiisu ay dhiiranaan ka helayaan soo laabashadii cajiibka ahayd ee ay PSG guusha kaga soo gaadheen wuxuuna Ter Stegen sheegay in ayna Barca u ciyaarin sida PSG oo kale.
Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxdiisa Man United ayaa kulankii lugtii labaad ee wareegii 16ka Champions league waxay booqdeen Parc des Princes iyaga oo guuldaro 2-0 ahi ay Old Trafford kaga soo gaadhay PSG laakiin waxay awoodeen in ay dhinaca kale u dhigeen balse Ten Stegen ayaan aaminsanayn in wixii PSG ay samaysay ayna kooxdiisa Barca samayn doonin.
Goolhaye Ter Stegen oo ka hadlay shirka jaraa’id ee kooxdiisa Barcelona ee ka hor kulanka Man United ayaa saxaafada u sheegay: “Barri ayaynu arki doonaa sida ay iyagu isku soo habeeyaan. Waxa wanaagsani waa in aanu u ciyaarno si ka duwan PSG. Waxaanu ka hor imanaynaa koox gaajaysan”.
Ter Stegen oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Iyagu kuamo ay marti gurigooda ka yihiin ayay soo guulaysteen isla markaana ma haysano faa’iido aad u wayn. Waxaanu doonaynaa in aanu difaacano isla markaana aanu muujinayo in aanu labada kulanba ku fiicanahay. Waxaanu u baahanahay in aanu barri si fiican u ciyaarno’.
“Waxay haystaan ciyaartoy deg deg badan, waxaa waajib kugu ah in aad markasta ka warqabto sidii aanu ahayn (Old Trafford). Waxaanu doonaynaa in aanu soo baxno oo aanu ciyaarta maamulno sidii ay markaasta ahayd, laakiin marka aanu difaacanayno waxaa waajib nagu ah in aanu u samayno sidii Old Trafford” ayuu Ter Stegen hadalkiisa ku sii daray.